Indlela yokulahla umjelo emlonyeni wakho?
Ngelishwa, ebomini bethu kukho rhoqo kubangele ukuphazamisa ubukho obuhle kunye nobumnandi. Akukhona nje ngezifo ezinzulu ezithatha ngokupheleleyo kunye nesigulane ngokwazo kunye nabathandekayo bakhe. Ngokuqhelekileyo, ekubonweni kokuqala, into encinci kwaye engathandekiyo, ingathintela kakubi kakhulu impilo yethu engokwenyama, kodwa imvakalelo kunye nokuqonda kwezinto ezizungezile nabantu. Enye yezizathu ezinjalo ezingamangalisi zinokudideka.
UZaeda ubizwa ngokuba yi-crack encane, eyakhiwe ekhoneni lomlomo, ekuhlanganiseni kwemilomo ephezulu nephantsi. Esi sifo, akunjalo, asiyithwali nantoni na into enqwenelekayo, mhlawumbi ngokwemvakalelo okanye kwi-aeshetics. Isizathu sokuba kwenzeka ukuba kuthathwe i-seizure ingaba yindlela yokuphendula okanye i-avitaminosis.
Esi sifo sisoloko senziwa njengempembelelo ecaleni yesifo. Inkqubo yezi zilandelayo zilandelayo: i-organism ehluphekileyo isifo iyancipha, imisebenzi yayo yokukhusela nayo ingasebenzi kakuhle, ngasemva kwesi siqhelo kunye nezilwanyana ezincinci ezisemlonyeni womntu, ziqala ukubonakala njengezibilini ekhoneni lomlomo.
I-Zaeda iyakwenzeka kumntu omdala kunye nosana. Esi sifo siqala ngesimo esifanelekileyo, ngeli nqanaba ukwenzela ukukhusela ukuphuhliswa kwesi sifo, kwanele ukuba kuqinisekiswe ukuba indawo echaphazelekayo ayikho imozulu-eyatshitshiswayo, ingakumbi ngexesha lokubanda. Ukunciphisa indawo eyonakalisiwe kwinqanaba elisisigxina sesifo, kwaye ukukhusela ukuqhuba okunye, kwanele ukuyihlutha nge-petroleum jelly okanye ukucoceka ngomlomo.
Iindidi ezahlukeneyo zokukrazula (ibhakteria, i-fungal)
Qinisekisa ukuba isizathu sokubanjwa kungabonakala kwimbonakalo yangaphandle. Mhlawumbi iindidi ezininzi zokuphuhliswa kweziganeko zokuqala - oku kukuthi ukuba isilonda sihlanganiswe ne-purulent-bloody crust, ngoko kubangelwa ukuvela kwayo kunye nophuhliso oluqhubekayo lweebhaktheriya ziyi-bacteria (streptococci okanye staphylococci). Okwesibini kukuba ukuba isilonda sinxeba elibomvu eliqombileyo kunye neengubo zokukhanya, apho imeko ebonakalayo yimbungulu.
Xa kuthathwa ingqungquthela, into yokuqala yokuyenza kukuba uyihlolisise, ukuze uqaphele isizathu esibangela ukuba kwenzeke, i-fungi okanye ibhaktheriya. Oku kuyimfuneko ukuze ukhethe indlela efanelekileyo yokonyango.
Ukuba kuvela ukuba ukutshatyalaliswa kwindalo kwindalo, kuyakufuneka ukuba usebenzise amafutha anjenge-nystatin okanye i-levorin ukuyiphatha, ukuba i-beet iyinxalenye yebhakteria, i-ointments equkethe ii-antibiotics ezifana ne-methyluracil okanye i-levomycin kufuneka isetyenziswe ukuyiphatha.
Kufuneka ikhunjulwe ukuba ukuze kupheliswe ukuxhatshazwa, kufuneka unyango oluyinkimbinkimbi, olunokuthi luhlale lunye ukuya kwiiveki ezimbalwa.
Ingundoqo yonyango oluyinkxalabo kukuba, emva komhla emva kokutya, utyumle isilonda kunye nezinto ezomileyo nezakhiwo ezivuthayo, umzekelo, uhlaza. Kwaye isiqingatha seyure ngaphambi kokutya kunye neyure ngaphambi, indlela yokulala kwilonda le-lubricate ngeoli, efanelekileyo ukunyanga uhlobo oluthile lwe-bnetic bacterial or fungal.
Ukunyangwa kwesi sifo, amayeza emveli, afana nama-rinses kunye nama-lotions, nawo asebenza kakuhle. Ukuhlanjululwa komlomo kunceda ukuqeda i-microbes kunye ne-bacteria. Ngexesha lokuhluthwa, i-tincture yomdongo okiweyo oomisiweyo isetyenzisiwe, i-tincture yenziwe ngo-1 ithispoon ye-bark ukuya ku-400 ml yamanzi abilisiwe, isisombululo sithathwa kwiiyure eziyi-8. Kwakhona iindlela ezisebenzayo zokuhlanjululwa kukungenisa ngaphakathi kweengcambu ze-calamus.
Njenge-agent ye-bactericidal-cauterizing, i-oil tree ye-tea, enokuthengwa kuma-pharmacy, isetyenziselwa amaqabunga etiyi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusetyenziswa kweoli ye-chai kufuneka kube ngokungqongqo ngokuhambelana nemiyalelo eqhotyoshelwe kuyo. Kwakhona njengommeli omelayo, ungasebenzisa ioli ye-St. John's wort kunye neqabunga elitsha le-aloe.
Kwimeko apho awukwazi ukuphilisa ukutshatyalaliswa kwakho ngeentsuku ezingama-7-10, okanye ukuba unyango lunikeza impembelelo yesikhashana, emva kokubanjwa kokutshatyalaliswa, kufuneka udibane nodokotela. Inyaniso kukuba, njengoko sele kukhankanywe ngasentla, esi sifo sisiphumo salo kuphela kwezinye iziphazamiso emzimbeni, eziqhelekileyo ezinxulumene nesigxina sesisu, esingazigqirha kuphela, ngeemviwo kunye neziphumo zokuvavanya.
Impembelelo yokutshaya kwesikhumba kunye nokubala
Unokususa njani ukukhathala kwamehlo kunye nemifuno?
Iphunga elimnandi lisuka emlonyeni, indlela yokulungisa ngayo
Ukuphulukiswa kalisa ngeendlela zobuqhelo
Iimpendulo zemibuzo ebuzwa rhoqo kwi-gynecologist. Icandelo 2
Unyango lwezonyango zomntu ozithukuzayo
IHoroscope ngo-2015 ngePisces
Ukungabikho kweendonga zesisu - ukuzisebenzisa ukuqinisa
Ukuzithiba kokutya xa ulahlekelwa ngumzimba
Inwele entsha eyenziwe ngu-Alyona Vodonayeva yabangela ukudabuka kwiwebhu, ifoto
Kutheni ilukhuni lukhuni ebusweni?
Uya kuphi u-Eva kaNtshonalanga ka-2014?
I-Broccoli neStilton isobho
Imithetho elishumi yokuxabana eyakhayo
Usebenza njani ukusilalisa umzimba?
I-Grillage ngeepiney nut
Ukupheka: ukutya, iimveliso zokutya
Ukujonga ngesondo phakathi kwamadoda ase-Arab
Inkukhu yesibindi inxibe i-waln-apple
Okroshka kwi-birch sap
Yintoni enokugqoka iibhothi ze-ankle: iingcebiso ezili-16
Njani ekhaya ekhaya?
Iimbasa eziphakamileyo kwihlabathi